Ihe niile banyere Compressing a Video
Ọ bụghị ihe dị mfe ọrụ mpikota onu a video iche iche formats dị iche iche na ngwaọrụ. N'ebe a, anyị ga-amasị ịkekọrịta ụfọdụ ndị nduzi na-mpikota onu videos.
2 Olee mpikota onu a Video
2.1 Olee mpikota onu Video Files
2.2 mpikota onu Videos Na Sorenson Media piakota 9
Ma gụọ 2.3 mpikota onu Videos Na Mac Finder
2.4 mpikota onu Video Na QuickTime Player Pro
3 mpikota onu Dị Iche Iche Video Formats
Fraps 3.1 tọghata Video
3.3 mpikota onu Audio Files
3.4 mpikota onu Video N'ihi Vimeo
3.5 mpikota onu FLV Videos
3.6 mpikota onu MKV
3.7 mpikota onu MP4
3.8 mpikota onu MOV
3.9 mpikota onu WMV
3,10 mpikota onu AVI
4 aduakde mpikota onu Videos
4.1 mpikota onu Video maka Email
4.2 mpikota onu Video maka YouTube
Ị na-ọsụsọ na-agba ihe karịrị chepụta a ụzọ mpikota onu gị MP4 video? A nnukwu MP4 video-eme mgbe nile nsogbu. Ọ na-ewe ọtụtụ ohere nke diski ike gị, nke na-eduga jiri ọsọ nke gị na kọmputa. Ọ nwere ike na-azọpụta ọma ruo ntụrụndụ na ọ laa ruru ya ewepụghị ahu. Ọ ọbụna curbs gị bulite na internet ma ọ bụ zipu na nke enyi anyị maka òkè. Ụzọ ọ bụla mpikota onu ya?
Maa. Na ihe dị mfe ma dị ike MP4 Compressor dị ka Wondershare Video Ntụgharị, na ị na-enwe ike mpikota onu MP4 videos n'oge na-adịghị na lossless àgwà na elu ndakọrịta (ogbe mkpakọ akwado).
Best MP4 Compressor maka Windows / Mac (Yosemite gụnyere)
Mfe mpikota onu MP4 video enweghị ihe ọ bụla àgwà ọnwụ.
Hazie video ntọala dị ka bitrate, mkpebi, etiti ọnụego na ndị ọzọ.
Akuku, jikota, bugharia ma kewaa video n'ime usoro ihe omume.
Fast akakabarede ọsọ jiri ya tụnyere ndị ọzọ video converters na ahịa.
Akwado os: Windows 10/8/7 / XP / Vista, Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6
1. Ibu Ibu MP4 videos a MP4 Compressor
Pịa "Tinye Files" akara Ibu Ibu gị ebe faịlụ site oche ma ọ bụ nchekwa. Ị nwere ike mbubata ihe karịrị otu faịlụ, dị nnọọ pịa "Ctrl" mgbe na-ahọpụta ndị MP4 faịlụ. Ma ọ bụ nanị ịdọrọ na dobe niile MP4 videos mkpa ka ị mpikota onu n'ime a usoro.
2. hazie video ọnọdụ igbutu video size
Pịa "mmepụta Format" nhọrọ n'akụkụ aka nri nke isi window iji họrọ MP4 dị ka mmepụta usoro. Wee pịa "Mwube" button ka ịhazie parameters maka ma video na ọdịyo. Ebe a, ị pụrụ nanị họrọ "Obere Size" iji belata gị file size ukwuu. Alternatively, kpatụ parameters site onwe gị:
Encoder: Pịa aro iji nweta wedaa nhọrọ, mgbe ahụ, họrọ otu, ma ọ bụ nanị ka ọ dị ka defaulted. Mkpebi: 320 * 240.480 * 272.480 * 368.640 * 480, na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu on iPod, iPhone 4 / iPhone 4S, PSP (gụnyere PSP3), 480 * 272 arụ ọrụ dị ukwuu. Ụba ọnụego: Ị nwere ike ịhọrọ si dị iche iche ụkpụrụ ịkụda ma ọ bụ adị n'elu gị ebre ọsọ. N'ozuzu, uru n'elu 20 na-eme ka obere dị iche. Bit ọnụego: Uru nso: 256kbps ka 2000kbps, họrọ a kwesịrị ekwesị onye dị ka kwa gị mkpa.
3. Malite MP4 mkpakọ
Mgbe niile ntọala afọ ju, kụrụ "tọghata" bọtịnụ na ka a usoro-elekọta MP4 mkpakọ. Ugbu a, i nwere ike ịnụ ụtọ abịakọrọ MP4 video n'oge ọ bụla, n'ebe ọ bụla!
Video nkuzi: Olee otú mpikota onu MP4 video faịlụ
Olee otú iji tọghata na Ọkụ MP4 ka DVD na Mac / Windows
Top Iri MP4 ka MP3 converters Online
Olee otú iji tọghata F4V n'ime MP4 na Zero Ogo Loss
Audacity, Import na Export MP4
Olee otú iji tọghata WLMP ka MP4 na Zero Ogo Loss
> Resource> MP4> Olee mpikota onu MP4 (MPEG / mpg) Video na Windows & Mac